[Steam] Ny antsasaky ny fiainana 2, ny fizarana, ny morontsiraka very ary ny maty dia maty Betas | Avy amin'ny Linux
[Steam] Ny antsasaky ny fiainana 2, ny fizarana, ny morontsiraka very ary ny maty dia maty Betas
Izy ireo dia Rohy | | GNU / Linux, Games, About us
Androany maraina rehefa nanomboka Steam aho dia tena faly ary izany no betas amin'ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra: Half Life 2.
Ity lahatsoratra ity dia mety misy spoliers sasany, aza vakiana izany raha tsy efa nandalo ny antsasaky ny fiainana 1. Raha te hanohy hamaky ianao dia misy izany.
Amin'ny antsasaky ny fiainana 2 dia miverina mandray ny anjara asantsika isika Gordon freeman. Roapolo taona no lasa taorian'ny zava-niseho tao amin'ny Black Mesa izay niarahan'ny mpihetsiketsika tao anaty hibernation. Tsy nijanona ny tafiotra vavahady ary tafika iray avy amin'ny tontolo hafa no nanafika ny Tany nanandrana nandresy ny Tany, fa vondrona mpikomy, notohanan'ny iray amin'ireo firazanana no niady tamin'izy ireo ary notarihin'ny mpiara-miasa taloha tao amin'ny Freeman ary nanandrana akaiky ny vavahady mandrakizay.
Mandritra ny lalao dia mandeha izahay Tanàna 17, izay itarihana ny fanafihana ary koa ny tanàna taloha sy ny toerana hafa, manampy ireo mpikomy hamarana ny fanafihana.
Tsy ho irery i Freeman satria mandritra ny lalao Alex, zanakavavin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa taloha tamin'i Freeman, ilay robot robot an'ity sy ireo mpikomy, dia hanampy antsika.
ny fizarana Nitranga izany taorian'ny zava-niseho tamin'ny Half Life 2, raha Lost Coast kosa dia fizarana misaraka izay hisehoan'i Freeman any amin'ny tanàna amoron-tsiraka ary hiezahanay handresy ny tafika manafika, na dia somary fohy aza izany.
Ary farany misy ny Deathmatch izay natokana Multiplayer. Ity beta ity dia efa andro maro (na talohan'ny Portal aza), nefa toa tsy dia malaza loatra (farafaharatsiny tsy mahita mpizara maro aho ary foana foana ireny)
Toy ny mahazatra dia tsy mahazo afa-tsy ny betas ianao raha efa nividy azy ireo tamin'ny kinova ho an'ny Windows sy Mac. Ankoatr'izay dia mamporisika anao aho ny hiandrasana ny hamoahana azy ao amin'ny magazay sy hisamborana ilay Orange Box izay mitondra izany rehetra izany miampy ny vavahady voalohany amin'ny € 13.99 (tsy ao anatin'izany ny Deathmach). Ny Lost Coast dia azo vidiana amin'ny Half Life Complete Pack (€ 27.99) na Valve Complete Pack € 71.99).
Tsy misy isalasalana, lalao tsara tokony hozahanao.
Vidio ny antsasaky ny fiainana 2
Vidio ny antsasaky ny fiainana 2: fizarana voalohany
Vidio ny antsasaky ny fiainana 2: fizarana faharoa
Vidio ny antsasaky ny fiainana 2: Deathmach
Vidio ny boaty Orange
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » [Steam] Ny antsasaky ny fiainana 2, ny fizarana, ny morontsiraka very ary ny maty dia maty Betas
Ie, tiako ny CS: MANDEHA! ary ny devoly 3 xDDD
Azonao atao ny mametraka diablo III amin'ny PlayonLinux tonga lafatra, misy mombamomba azy io, nataoko izany, toa an'i Skyrim ihany.
Mahaliana tokoa ity mahazo ity, amin'ity izao ity dia hipoka ny fizarazaran'i Windows aho, hehe
Fantatro, ary manana an'io toa io aho, saingy ny tena marina dia tsy mihetsika tanteraka: /
Ankehitriny aho dia afaka milalao Half-Life miaraka amin'ny Orange Box ao amin'ny Debian Wheezy (nanavao ny latabatra 3D teo aloha).
linuxerolibre dia hoy izy:
Farany dia nahazo vahana ireo Steam, ary efa an-tsipika ny "Greenlight", izay sahala amin'ny 341, ampahefatry ny katalaogasy ... Mahatsiaro ho tonga amin'ny GNU / Linux amin'ny fotoana mety indrindra aho
Mamaly amin'ny linuxerolibre
Tsy mahita afa-tsy DotA2 sy Knights Spiral aho. Izaho no nametraka ny farany niaraka tamin'ny installer avy tamin'ny tranokala ofisialy, saingy tsy ny mombamomba ahy «original» (ilay avy any Steam), ka tsy mampihomehy ny milalao an'io 🙁
Izaho koa dia manana ny Knight Spiral, fa toa anao kosa tiako ny client Steam.
Ho ahy io, miaraka amin'ny Quake Live, ilay hany karazana Free2Play azo lalaovina tsara nefa tsy mandany ora sy ora maro na handany vola.
Mieritreritra aho izao raha mividy azy.
Ny zanakavavin'i Dr. eli vance dia antsoina hoe Alyx vance, fa tsy Alex, hampidina azy ireo aho rehefa mivoaka amin'ny fomba ofisialy, manantena ny antsasaky ny fiainana 3, na ny fizarana 3 na inona na inona antsoina hoe 😀
Ny International Space Station dia hampiasa ny Debian Squeeze ho solon'ny Windows XP
Ahoana ny fanovana netbook taloha ho "Firebook"